‘ज्वाइँ गुट’का जेठान मन्त्रीको मनोवाद – देशदृष्टि
Posted bymilanbagale October 15, 2021 Posted inUncategorized
न्याय नपाए गोरखा जानू भन्थे। म चाहिँ गोरखा गइनँ। ५०० किलोमिटर हिँडेर, गोडाभरी फोका उठ्ने गरि काठमाडौं पनि पसिनँ। काठमाडौं आएर माइतीघर मण्डलमा धर्ना पनि बसिनँ। धर्ना नबसेकोले प्रहरी खोरमा पनि म पुगिनँ। मलाई पनि न्याय नै चाहिएको थियो। भुइँमान्छेलाई भुइँको न्याय चाहिएकोले होला, भुइँभुइँ सुइँ..सुइँ… हिँड्दै आएँ। मलाई हावातालमा न्याय चाहिएको थियो। त्यसैले हवाईजहाजमै उडेर काठमाडौं आएँ। ज्वाइँसापले मेरो न्यायको सबै बन्दोबस्त मिलाइसक्नु भएको थियो। आएपछि माइतीघर मण्डलतिर किन, सिधै न्यूरोडतिर हानिएँ। दशैंको भीडभाड छिचोल्दै गतिलो दौरासुरुवाल सिलाएँ।
मन्त्री छान्न मेरो ज्वाइँ जस्तो सिपालु त कोही नाइँ। एक जनाको नाममा पासा फालेर हल्लाखल्ला मच्चाइदिनुभो र प्रधानमन्त्रीको मान्छेजस्तो बनाइदिएर मलाई ट्याक्क मन्त्री बनाइदिनुभो। प्रधानमन्त्रीले मेरो मान्छे होइन भन्नुभएन। उहिल्यै म उहाँकै मान्छे थिएँ। बिचमा हराएको मात्र न हुँ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छान्ने झमेलो मिलाउन ३ महिना किन लगाउनुभो भन्ने कुरो मैले जति बढी कसले बुझेको छ र? जेठानको हैसियतमा उहाँ (मेरा ज्वाइँसाप)ले मलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने थियो। म मन्त्री बनेपछि मिडिया अरिंगालझैं खनिने निश्चित थियो। सडक प्रदर्शन पनि हुनसक्थ्यो। दशैंको मेसोमा मन्त्री बनाए विरोध पानीको फोका झैं फुट्ने विश्वास दिलाउनुभो ज्वाइँसापले। प्रधानमन्त्रीले मान्नुभो। अनि म ट्याक्क मन्त्री बनेँ। अरु हिस्स परे।
मलाई मन्त्री बनाउनुअघि ज्वाइँसापले एउटा हल्ला फिजाउनुभो। मन्त्री पदमा उहाँकै अफिसको एउटा कारिन्दाको भाग छुट्याएको भनेर। यति भएपछि विरोधको आवाज चर्को भैहाल्यो। ‘कहाँ मैले मन्त्री बनाउँछु? मन्त्री त प्रधानमन्त्रीले बनाउनुहुन्छ। अब हुँदाहुँदा उहाँकै पार्टीको फलानोलाई मन्त्री बनाउनसमेत मैले दबाब दियो भनेर हल्ला फिजाइएछ।’उहाँले यस्तो भनिदिएपछि दुनियाँ एकछिन रनभुल्ल पर्‍यो। दुनियाँ रनभुल्ल परे पनि पत्रकार रनभुल्लमा परेनन्। नाता खोतलिदिएर हैरान बनाए। वास्तवमा मेरो नाममा कसैले हल्ला फिजाएकै थिएन। उहाँले नै आइडिया लगाएर हल्ला फिजाइदिनुभो। कांग्रेस त म छँदै थिएँ। तर, कांग्रेस भएर मैले मन्त्री पाएको हुँदै होइन। म सांसद होइन। महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि होइन। कांग्रेसमा मन्त्री बन्न यति सजिलो कहाँ छ र?
(२०७८ साल असोज २३ गते नेपाललाइभ डटकममा प्रकाशित )
कायाकैरनमा कर्कश विज्ञापनको कहर